Tag: makaro | Martech Zone
Vatengesi vakakura vanonakidzwa nekutaura nezve Kudzoka pane Investment. Nezuro, ndakaenda kumusangano nekambani yezvivakwa yaive nematambudziko nehurongwa hwavo hwewebhu. Bhurocha ravo saiti yanga isiri kutyaira akawanda anotungamira uye ivo vaishandisa mari yakati wandei pane akati wandei ezvirongwa zvekutyaira zvinotungamira mune yavo yekutengesa fanera. Dambudziko ratakatora nderekuti ivo vaibhadhara kumakambani ese aya kukwikwidzana navo
Svondo, July 25, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Musiyano mukuru kwazvo wandakaona mumakambani ese andinoshandira pakubudirira kana kutadza ndiko kugona kweanamuzvinabhizimusi kana bhizinesi kuti aite chaizvo. Zvinondishungurudza kuona shamwari nevamwe vandinoshanda navo vasingazive kubudirira kwavo nekuda kwekuti havaite. Kutya uye makaro ndizvo zvinhu zviviri zvandinoona zvinomisa vezvemabhizimisi munzira yavo. Heano mashoma mienzaniso: Muzvinabhizimusi A ane chakakura chigadzirwa chiri kushanda
Mugovera, Mbudzi 14, 2009 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Kwekanguva kapfuura, Google yakaisa patent pakuongorora kunyoreswa kwenzvimbo sechikamu chechiremera chesaiti. Mhedzisiro yacho ndeyekuti iyo yese blogosphere uye SEO maindasitiri akatanga kuraira vatengi kuti vanyorese yavo maseru kune iyo yakanyanya nguva Ini ndakatonyora nezvazvo nguva pfupi yadarika .. uye ndikarambwa neshamwari yakanaka PJ Hinton kubva kuCompendium Blogware (ona zvataurwa). Iye zvino Google iri kuwedzera kumberi munzira yayo - naMat Cutts achidonha